Cumar Xaashi & C/karim Laqanyo oo ku geeriyooday qarax ka dhacay Beledweyn. [Akhris …] – Radio Daljir
Cumar Xaashi & C/karim Laqanyo oo ku geeriyooday qarax ka dhacay Beledweyn. [Akhris …]
Beledweyn, June 18 – Wasiirkii amniga ee dawladda KMG ah Soomaaliya Col: Cumar Xaashi Aadan, danjirii Soomaalia u joogay koonfur Afrika C/kariin Faarax Laqanyo ayaa ku dhintay qarax is-miidaamin ah oo maantay ka dhacay gudahaa magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan.
Tiro kale oo qaar ka mid ahi ay mas’uuliyiin ahaayeen ayaa ku geeriyooday qaraxa, halka tobaneeyo dad rayad ahina ay ku geeriyoodeen.
Dhimashada wasiirka iyo danjiraha ayaa waxaa xaqiijiyey afhayeenn u hadlay wasaaradda warfaafinta ee dawladda KMG ah Soomaaliya kadib hadal kooban oo uu wariyaasha ugu sheegay magaalada Muqdisho, waxaana qaraxaasi sheegtay in ay ka danbeeyey afhayeen u hadlay ururka Al-shabaab ee dagaalka kula jira dawladda Shiikh Shariif.
Qaraxaan oo ahaa mid aad u xoog badan ayaa galaaftay nolosha dad aad u tiro badan oo gaarayaa illaa iyo 11 qof waxaana sidoo kale ku dhaawac tiro intaasi ka badan sida ay tilmaamayaan wararka aannu ka helayno magaalada Beledweyn, waxaana wararku ay intaasi ku darayaan mas’uuliyiin kale in ay qaraxaasi ku dhinteen kuwaasi oo uu ka mid ahaayeen odayaal dhaqameed si weyn looga yaqaanay gobolka Hiiraan.
Qaraxa ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana lala beegsatay hotelka lagu magacaabo Madiina, oo ay deggan-yiin mas’uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaaliya, kuwaasi oo uu ka mid yahay wasiirkii amniga qaran Cumar Xaashi Aadan, safiirka Soomaaliya u joogay wadanka koonfur Afrika horayna safiir uga ahaan jiray dalka Itoobiya C/kariin Faarax (Laqanyo) odayaal dhaqameed ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo mas’uuliyiin kaleeto oo ay ka mid yihiin kuwa hadda gacanta ku haya maamulka gobolka iyo kan degmada Beledweyn.
Dadka dhintay ayaa la tilmaamayaa in ay u badnaayeen ciidankii ammaanka iyo dad marti ahaa oo madaxda dawladdu ay halkaasi kulan kula lahaayeen, kuwaasi oo u badnaa odaayaal dhaqameed loo soo xulay ka talinta xaaladda ammaan ee gobolka waxaana wararku intaasi raacinayaan in qaarkood qaraxaasi ku geeriyoodeen.
Waa qaraxii ugu weynaa oo ka dhaca magaalada Beledweyn isla markaana galaafta nolosha dad sidaasi u tiro badan, waxaana uu ku soo beegmay xilli dhawaan xal buuxa laga gaaray is afgaran waa dhiig ku daatay oo u dhaxeeyey melleyshiyaad isla gobolka ku abtirsada.